Sidee damiirkaagu u tababaran yahay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ilmuhu wuxuu rabaa "buskud", laakiin wuu ka leexanayaa weelka wax lagu kariyo. Waxay dib u xasuusataa wixii dhacay Malachi ee ugu dambeeyay markii, iyada oo aan la is weydiin, ay qaadatay "buskud". Dhallin yari wuxuu imaanayaa guriga shan daqiiqo kahor waqtiga loo qorsheeyay sababta oo ah ma doonayo inuu wax weydiisto imaatinkiisa dambe. Cashuur-bixiyeyaasha waxay xaqiijinayaan inay si buuxda u soo sheegaan dakhligooda sababtoo ah ma doonayaan inay bixiyaan ganaaxyo markii canshuur celintooda la hubinayo. Cabsida ciqaabta waxay dad badan ka celisaa qaladka.
Qaarkood kama walwalaan, laakiin waxay u tixgeliyaan ficilladooda inay yihiin wax aan micno lahayn ama u maleeyaan inaan la qaban doonin. Waxaan wada maqalnay dadku iyagoo dhahaya ficiladooda wax dhibaato ah uma geysan; markaa maxaad u xanaaqdaa?
Kuwa kale waxay sameeyaan wax sax ah, sababtoo ah waa waxa saxda ah. Waa maxay sababta qaarkood inay leeyihiin damiin si wanaagsan u horumarsan halka kuwa kalena aysan u muuqan inay aad uga walaacsan yihiin cawaaqibka waxa ay sameeyaan ama ka gaabsadaan inay sameeyaan? Aaway daacadnimadu?
Rooma 2,14: 17, Bawlos wuxuu ka hadlayaa Yuhuud iyo kuwa aan Yuhuud ahayn iyo xiriirka ay la leeyihiin sharciga. Yuhuudda waxaa hagaya sharciga Muuse, laakiin qaar ka mid ah dadka aan Yuhuudda ahayn ee aan sharciga haysan waxay dabiici ahaan sameeyeen wixii sharcigu farayo. "Ficilladooda waxay ahaayeen sharci naftooda ah".
Waxay u dhaqmeen si damiirkooda ah. Frank E. Gaebelein wuxuu ku xusay faallada The Expositor's Bible Commentary (faallo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah) ama khaldan.
Markii aan u dhaqmay si aan habooneyn markii aan ahaa cunug, waalidkay waxay xaqiijiyeen inaan fahansanahay waxaan samaynayo iyo inaan dareemay dambiile. Dembiilenimadu waxay iga caawisay inaan gardaroodo damiirka. Ilaa maantadan, markii aan wax qaldamo ama xitaa aan ka fekero ficil qaldan ama aan fikir qaldan haysto, waxaan dareemayaa qoomamo oo waxaan isku dayaa inaan dhageysto ka dibna aan saxo dhibaatada.
Waxay u muuqataa in waalidiinta qaar maanta inaysan u isticmaalin dambiga "macalin". «Ma aha siyaasad sax ah. Dembiile caafimaad ma aha. Waxay dhaawaceysaa isku kalsoonida cunugga ». Dhab ahaantii, nooca khaladka ah ee dambiga wuxuu noqon karaa waxyeello. Laakiin saxaan sax ah, barida saxda ah iyo qaladka iyo ka qoomamaynta caafimaad qabta waxay ubaahantahay caruurta inay noqdaan qaangaar muhiim ah Dhaqan kasta oo adduunka ka jira wuxuu leeyahay nooc xaq iyo khalad ah waxayna ku soo rogaan ganaaxyo jebinta shuruucda u degsan dalka. Waa wax laga xumaado, xitaa calool-xumo, in la arko inta qof ee lumiyey baraarugnimadooda iyo damiirkooda.
Midka keliya ee inaga caawiya sidii aan ku gaari lahayn daacadnimo waa Ruuxa Quduuska ah. Daacadnimadu waxay ka timaadaa xagga Ilaah. Tilmaanta loogu talo galay damiirka xasaasiga ah ayaa kora marka aan dhagaysanno oo oggolaanno Ruuxa Quduuska ah inuu ina hago. Caruurteena waa in la baraa farqiga u dhexeeya waxa saxda ah iyo waxa khaldan, waana in la muujiyaa sida loo dhageysto damiirka Ilaahay. Dhammaanteen waa inaan barannaa dhageysiga. Ilaah wuxuu ina siiyay kormeerahan gudaha lagu dhisay si ay nooga caawiso inaan ku noolaano nolol aan lahayn xorriyadda, nolosha aaminka ah iyo inaan iswada noolaano.
Sidee damiirkaagu u tababaran yahay? - Ma jeexday meel wanaagsan ama masawiraday adigoo aan isticmaalin? Aan barinno in Ruuxa Quduuska ahi uu xoojiyo wacyigeenna ku saabsan waxa qaldan iyo waxa qaldan si aan ugu noolaano nolol daacadnimo leh.